I-Mariner Absolute Beachfront Experience
Falmouth, Tasmania, i-Australia
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Maree
I-Mariner ibheka oLwandle iTasman endaweni engasogwini yase-Falmouth, phakathi nomgwaqo ophakathi kweBay of Fires kanye neNhlonhlo yeFreycinet. Vuka kumsindo wamagagasi ogwini ngaphandle kwefasitela lakho futhi uthathe ukuthula nokuqabuleka kokuba ngasolwandle.
Zibone ngeso lengqondo umi phezu kompheme, umoya wasolwandle uheleza izinwele zakho namagagasi egeleza ngezansi. Ukubuka kwakho kuphezu kwamanzi anyakazayo, izinyoni zasolwandle ezihamba phezulu, nomkhathizwe ocwebezelayo ngaphesheya. Yonke imizwa ingeyasolwandle - umoya kasawoti, umsindo wamagagasi, ulwandle olukhulu oluluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaphandle kwalokhu akulona idekhi yomkhumbi; kunalokho, indawo yokucasha ephambi kolwandle ephefumulelwe eScandinavia esogwini olusempumalanga yeTasmania. Hlangana noMariner.
Amabhishi anesihlabathi sokuthatha idiphu noma ukuntweza emanzini ahamba ibangana nje ukusuka endlini, yona ngokwayo elisogwini lolwandle olunamadwala. Letha izinto zakho zokudoba, thatha incwadi enhle noma uhlole amabhishi afihliwe nama-cove ase-Falmouth. Futhi uma uzizwa unamandla, zonke izimangaliso zogu olusempumalanga yeTasmania zingaphakathi kwebanga lokushayela elilula.
** Ukunikezwa Okukhethekile: Jabulela ukwamukelwa okujabulisayo ngebhodlela elipholile elibandayo lewayini laseTasmanian elicwebezelayo ozolijabulela lapho ufika **
I-Mariner ifaneleka kahle ukuhlala kwabantu abadala, futhi ngenxa yalokho sinikeza indawo yokuhlala yabantu abadala kuphela.
UMaree Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: DA 066-18
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$350.
Hlola ezinye izinketho ezise- Falmouth namaphethelo